ओहो ! डाक्टर साबको भाषणको 'टेक्स्ट' पढेपछि मलाई पनि उहाँले यहि गाली गलौचमा नै डक्टरेट गर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो ।
अनि हाँस पनि उठ्यो, एउटै कटवाललाई कारबाहि गर्न नसकेर विक्षिप्त हुन लागीसकेको बेलामा (बेक्कारमा) राष्ट्रपतिलाई समेत गलहत्याउने धमास सुनेर ।
हैन माओबादीको राजनैतीक मोडेल कस्तो रे'च हो?, राष्ट्रपति पनि नचाहिने ।
जे होस हिजोको बिष बमन पछि २-३ दिन तीनलाई 'सन्चो' होला भन्ने हेक्का राखेको छु मैले पनि ।
सरकारको काम कुरो प्रष्ट नभैराखेको बेलामा अहिलेको क्रियाकलापले अली प्रष्ट पारे जस्तो लाग्यो। सरकारले जनतालाइ राहात दिन होइन कि कसरी आफ्नो पकड जमाउन सकिन्छ उता ध्यान गएको छ। नत्र भने संबिधान सभाको चुनाब गरेर सरकारमा छीर्ने अनि सरकारबाट सेना आफ्नो हात लिने के यो कमिन्युज्म ल्याउने दाउ होइन?
देश अफ्रीका भन्दा जरजर छ। यिनीहरु घरी पशुपतीको पुजारी फेर्छन,घरी सेनापती फेर्छन, त्यसले जनताको चुलोमा जाउलो पाक्छ कि क्या हो? उत्तर कोरियामा जनता भोकै सुत्दा सरकार अझै मिसायलको आगोमा किन रमाइरहेको छ भनेको त हाम्रै नेपाली कमरेडहरुले छर्लंग पारिदिए।
अब के को बन्ने हो नि संबिधान? हुन त किन संबिधान सभाको चुनाब गरेको,कस्तो संबिधान बनाउने जनतालाइ पत्तो नदिइ चुनाब गराइयो। चुनाब हुनु अघी नै बिभिन्न पार्टीहरुले संबिधानको खाका देखाएर चुनाब लड्नुपर्ने होइन? चुनाब संबिधान बनाउन होइन कि शक्ती हडपेर अरुलाइ साइड लगाउन खोजीएको ले अहिलेको स्थीती आएको हो। जस्को शक्ती उस्को भक्तीको अबस्थामा जस्ले साइड लगाउन सक्छ उस्कै दबीदबी हुन्छ नेपालमा अब।